Ram Booster - Memory optimizer Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimizer
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimizer APK ကို
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize Junk ဖိုင်များကို (အကြွင်းအကျန် Junk ဖိုင်များကိုစနစ်ရှိတဲ့ Junk, cache ကို junk ဖိုင်တွေကို log, ယာယီဖိုင်တွေ) အမျိုးအစားအားလုံးကိုရှင်းလင်းဖို့အစာရှောင်ဖုန်းကိုသန့်စင်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ တက်အခမဲ့ဖုန်းကိုသိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်သန့်ရှင်းရေး Ram ထဲမှာမာစတာ။ စူပါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကြိုတင် task manager ကိုပိုမိုမြန်နှုန်းကိုတိုးပှား။
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize Key ကို Functions များ:
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize ကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချနှေးကွေးသည့် junk, ကျန်နေတဲ့နှင့် cache ကိုဖိုင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင့်သိုလှောင်မှုအာကာသအခမဲ့တက်ကူညီပေးသည်တဲ့ cache ကိုသန့်စင်နှင့်ဖုန်းသန့်စင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် cache ကိုသန့်စင်နှင့်ဖုန်းသန့်စင်မှုနှင့်အတူသင်တို့သည်လည်းမှားဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲထိုကဲ့သို့ Facebook က, Messenger ကို, WhatsApp ကို, Instagram ကိုအဖြစ်လူမှုရေးအက်ပ်များမှ cache ကိုဒေတာသန့်ရှင်းရေးကနေပိုပြီးနေရာလွတ်နိုင်ပါတယ်။
junk ဖိုင်ဖွ cache ကို Cleaner- သန့်ရှင်းသိုလှောင်မှုတက်လွတ်မြောက်မှ Junk ဖိုင်များကိုအမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်
အဆိုပါ junk file ကို cache ကိုသန့်စင်နှင့်ဖုန်းသန့်စင်ထပ်တိုးကူညီနှင့်သင့်ဖုန်းရဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်နိုင်သည့်သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိုလှောင်နေရာတက်ယူကြောင်း cache နဲ့ Junk ဖိုင်များကိုကို clean up နိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာအကြွင်းအကျန်ဖိုင်များ, cache ကိုဖိုင်များ, အပူချိန်ဖိုင်များ, ပေါရာဏ APK များနှင့်အခြားကြီးမားသောဖိုင်များကို။ )
☆ RAM ကို Booster (သိုးထီးတကောင်ကိုသန့်စင်)
သူတို့ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြေးလုပ်သင့်ဂိမ်းများမြှင့်တင်ရန်, သင့်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် RAM ကိုတိုးတက်စေရန်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်။
တဦးတည်းကိုအသာပုတ် Boost RAM ကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့အားဖြင့်ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ကူညီပေးသည်။ သင့်မိုဘိုင်းတိုးမြှင်ပြီးနောက်, သင်ကဘယ်လောက်ပိုမြန်ကြည့်ရှုရန်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် run နိုင်ပါတယ်။
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize Junk ဖိုင်များကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်နှေးကွေးသောအပြေးနှင့်ကျန်ရစ်မှသင်၏ဖုန်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ RAM ကိုတက်လွတ်! ဒီ Lite tool ကိုအတူမျှအမြစ် access ကိုဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကအာဏာအရှိဆုံးဖုန်းကိုသန့်စင်ဖြစ်ပါသည်
☆ဘက်ထရီ Booster (charger ကိုအာနိသင်တိုးမြှင်)
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေနှင့် running app များကို hibernating အားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့ကူညီပေးသည်။
ပါဝါကိုကယ်ဖို့နောက်ခံ running app များကိုရပ်တန့်, ဘက်ထရီချွေတာအတွင်းဘက်ထရီချအအေးလည်းဘက်ထရီသက်တမ်း & အေးကိုတိုးချဲ့ပါ။
ဘက်ထရီ Boosters နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းအာနိသင်တိုးမြှင့်
☆ CPU ကို Cooler (ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်အပူဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုသန့်ရှင်းသော apps များ)
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်း CPU ကိုစစ်ဆေးမှုများအပူချိန် & မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုဆင်း Cool ။ အကောင်းဆုံး device ကိုအေး။ အလွန်အစာရှောင်ခြင်း & ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များလည်ပတ်နေရပ်တန့်နှင့် CPU ကိုတစ်ဥပမာအနားယူကြကုန်အံ့။
စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအပူချိန်အပြောင်းအလဲများ, apps များအလွန်အမင်း CPU ကိုစားသုံးကို detect နှင့်အအေးတိုးတက်မှုစတင်သည်, ထိထိရောကျရောဖုန်းကို temperature.By မှတ်ဉာဏ်ထပ်တိုးလျှော့ချပါကတတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်ခြင်းက Android device ကိုနှိမ့်ချအအေးပေးနိုင်သည်။
အခြား feature များ
မြန်နှုန်းနှင့်ဖုန်းသန့်စင်တဲ့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ကို Android application ကိုအောင် ultra-သေးငယ်တဲ့ installation ကိုအထုပ်။ အသေးစားနှင့်ရိုးရှင်းသောဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းမြန်နှုန်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှာအစဉ်အမြဲကြောင်းကိုသေချာအခြားအာနိသင်တိုးမြှင့် app တွေထက်ပိုပြီးပါဝါ pack မှာ။
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize ရုံ 1-ကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏ Android ဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize ကိုလည်းကိုလည်းဖုန်းကိုသန့်စင်တစ်ခုဖြစ်သည် cache နဲ့ Junk ဖိုင်များကိုအဘို့သင့်ဖုန်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်တယ်, သူတို့ကိုကိုအလွန်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်သန့်ရှင်းကြပြီ။
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize ရဲ့ user interface ကိုကအသုံးပြုသူ-friendly နှင့်သင့်ဖုန်းရဲ့ RAM ကိုတက်လွတ်မြောက်ဖို့ cache နဲ့ Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူအောင်, ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်။
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimize cache နဲ့ Junk ဖိုင်များကိုကို clean up, သင့်ရဲ့ device ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်, အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းတိုးမြှင်ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
ယခုမြန်နှုန်း Install လုပ်ပြီးသင်ရုံ 1-ကိုထိပုတ်ပါနဲ့ပိုမြန်ခြင်းနှင့် speedier ဖုန်းကိုခံစားနိုငျ!
သိုးထီး Booster - မှတ်ဉာဏ် Optimizer
5.00 ကို MB
Dev မှ Boost
မြန်နှုန်း Booster - ...
စူပါ Cleaner- ...